Waa maxay naqshadeynta arxan-darrada?: Astaamaha iyo shaqooyinka ugu muhiimsan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Waa maxay naqshadaynta arxan-darrada?
Waxaa jira naqshado lagu cabbiro cilmi-nafsigooda aan la taaban karin, waxaa jira kuwo kale oo lagu cabbiro halabuurka wanaagsan iyo qaybinta qaybaha garaafka. Waxaa jira kuwa kale oo, dhanka kale, u muuqda inay kor u kac badan yihiin sababtoo ah dheelitir la'aanta ka muuqata goobta.
Tobannaan sano, nashqadayntu waxay ahayd mid ka mid ah isbeddellada farshaxanka ee dhaleeceynta badan. Dhacdadan ayaa keentay in naqshadeeyayaal badan ay u qaataan si dhab ah naqshad dhamaystiran ama naqshad lid ku ah oo dhamaystiran. Maqaalkan waxaan ku tusi doonaa waxa ka mid ah mawjadaha kale ee aanad garanayn oo ay ku raran yihiin qaabab, midabyo iyo tibaaxo aan qof kastaa fahmin.
1 Naqshadaynta brutalist: waa maxay?
1.1 Astaamaha ugu muhiimsan
2 Naqshadaynta brutalist: Asal ahaan
2.1 Sanado kadib
3 Naqshadaynta brutalist ee da'da dhijitaalka ah
3.1 Dulmiga: hadda
4 Axmaqnimo iyo naqshad garaafeed
5 Naqshadayaasha ama fanaaniinta
5.3 Max'ed Bill
Naqshadaynta brutalist: waa maxay?
Naqshada arxan-darrada ah ama sidoo kale loo yaqaan waxashnimo, waxaa lagu qeexaa inuu yahay nooc ka mid ah dhaqdhaqaaqa bilicda oo ka kooban hawlo qaar oo buuxiya filashooyinka, markaa magaca iyo sidoo kale waxaa lagu qeexay adeege.
Si aad si fiican ugu fahanto wax yar oo hadda jira, ujeeddadeeda ugu weyn waa in la helo aragti ka-hortagga qurxinta ee naqshadeynta oo muujisa oo muujisa lafteeda iyada oo door bideysa alaabta ceeriin ee loo isticmaalo in lagu dhiso naqshadaha. Oo hubaal waxaad la yaabi doontaa qaabka uu u lahaa wax badan oo caan ah, sababtoo ah Dhab ahaantii waxay ku jirtay qaab-dhismeedka 1950-meeyadii ilaa 1970-yadii. Wax yar oo aan ka warqabin ayaa ah in ay hadda dib uga soo kacday mindhicirkeeda oo ay ku faaftay qaybta naqshadaynta casriga ee casriga ah.
Maxaase maanta muhiimad gaar ah loo siiyey?, waayo waa mid ka mid ah mawjadaha hadda socda ee sida aadka ah u soo jiitay indhaha daawadayaasheeda. Waxay soo bandhigaysaa waxa lagama maarmaanka u ah in la awoodo in la kala saaro inta kale iyo taas waxay ka dhigtaa qaab qabow oo adag.
Astaamaha naxariis-darrada badanaa waa muuqaal, xaqiiqadani waxay ka dhigaysaa qaab ka duwan oo ay adagtahay in la isku daro. Si ka duwan kuwa kale, qulqulka faneedku waxay u dhacayeen sida uu qabo kii ka horreeyay. In arxan-darro ah ayay dhex marayaan mid kale. Aynu bilowno:
Bandhiga alaabta: waxay leedahay qaab u gaar ah, taas oo ah qaab dhismeedka, oo aan wax xiriir ah la lahayn warbaahinta internetka.
Waxay isticmaalaan tones monochromatic kuwaas oo ka soo jeeda cawl, caddaan iyo madow.
Waxaa lagu qeexaa qaab shaqeynaya oo aan dhameystirneyn ama qaawan maadaama naqshadeynta iyo farshaxanka iyo quruxda aysan ku habboonayn heerarkeeda.
Curiyayaasha moodeelka ah iyo ku celcelintooda ayaa aad muhiim u ah.
Qaybaha sida caadiga ah waxaa lagu sifeeyaa cidhifyada rectilinear. Intaa waxaa dheer, qaybahan lama tafatirin ama laguma farsameeyo.
Naqshadaynta brutalist: Asal ahaan
Taariikhda hadda jirta si gaar ah aan u sheegno wuxuu ka bilaabmaa burburka, iyaga waxaan ku jirnaa 1940-kii iyo iyada, dhamaadkii dagaalkii labaad ee aduunka. Inta lagu jiro muddadan, qaar badan oo ka mid ah dhismayaal UK ayaa jiifa oo u muuqda kuwo gabi ahaanba dumay oo burbursan.
Guud ahaan dalku waxa uu u baahan yahay in uu dib u dhis ku sameeyo masiibadaas weyn,balse waa in sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyaa mar haddii ay u baahan yihiin in ay deriskooda iyo dhismayaal dawladeed ka dhistaan ​​oo ay ka dejiyaan dal gebi ahaanba burburay,waxaas oo dhan. sidoo kale waxay ku biirtaa yaraanta alaabta ceeriin.
Meel kale waxaan ka helnaa Midowga Soofiyeeti, oo ah waddan si buuxda u qaabaysan iyo dhismayaal dhismo ah. Waayo, waxay isku diyaarinayaan inay dhisaan qaab guryo horay loo sii diyaariyay oo loo yaqaan Khrushchyovka, Guryaha qaarkood oo lagu sameeyay alaab jaban oo la mid ah qaababkii hore. Habkan qaab-dhismeedku waxa uu hiigsanayaa in laga guuro bourgeoisie iyo raaxada oo uu ka tarjumo sinnaanta bulsho ee shuuciga.
Habkani wuxuu mar kale ku fidaa Boqortooyada Ingiriiska, isagoo abuuraya dhismayaal sida Hunstanton School, Smithson Square ee Magaalada Westminster, Tower Balfron iyo Masraxa Qaranka. Iyo sidoo kale adduunka intiisa kale oo leh Hall Memorial Memorial Hall ee Machadka Farsamada ee Illinois, Hall Concert Hall ee Australia, Maktabadda Robarts ee Toronto.
Sidan ayuu dhaqdhaqaaqani ku dhashay.
Caannimada weyn ee qaabkan cusub waxay la timid cawaaqib weyn, oo ay ku jiraan nidaamka kelitaliska ah. Taas macnaheedu waxa weeye, isticmaalka agabka iyo agabka sida shiraacyo monochrome ah oo waaweyn ayaa hadda ka dhigay mid aan midab lahayn oo soo rogaya hadda.
Dhammaadkii dhaqdhaqaaqani waxa uu soo baxay 70-meeyadii., laakiin ilaa maanta waxay ka tagtay taallo taariikhi ah oo aad u waaweyn oo ku baahsan adduunka oo dhan.
Naqshadaynta brutalist ee da'da dhijitaalka ah
Xigasho: Design Shack
Sannado badan ka dib markii ay dhammaatay naqshadaynta arxan-darrada ee naqshadaynta naqshadaha, waji cusub ama dhexdhexaad ah ayaa la soo bandhigay, da'da dhijitaalka ah. Horumarka iyo koboca tignoolajiyada, wakhtigan xaadirka ah waxa uu ku jiray is-dhexgalyada dhijitaalka ah.
Waqtigan xaadirka ah, dhaqdhaqaaqan, oo lagu soo bandhigay da'da dhijitaalka ah, wuxuu ka guuray dhammaan walxaha jireed ama cayriin wuxuuna ilaaliyay xidid ka soo jeeda xaqiiqda iyo dhismo aad waxtar u leh.
Axmaqnimada naqshadeynta shabakada had iyo jeer waxay ahayd mid shaqaynaysa. Mid ka mid ah shabakadaha soo noqnoqda waa Craigslist caanka ah. Maxaa naqshadeeyayaasha badani aysan garanaynin marka ay isticmaalaan ilo sahlan oo faa'iido leh, waxay diiradda saarayaan qaabkan mashruucyadooda iyo shaqadooda.
Astaamaha marka la barbar dhigo kuwa qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ayaa si aad ah loogu dhawaaqay qoraalka iyo ee kala doorasho midab kala duwan. Si ka duwan kuwii hore, hadda ma aha monochromatic.
Maanta, arxan-darrada waxay ku soo noqotay asalkeedii dhismaha. Da'da dhijitaalka ah, waxaa suurtagal ah in lagu sawiro shaashad bannaan oo midabada iyo midabada ay ku qarsoon yihiin. Dhammaan tafatirka waa la saaray waxaana la soo bandhigay xarfaha dhijitaalka ah iyo muuqaal labajibbaaran.
Axmaqnimo iyo naqshad garaafeed
Axmaqnimada xagga naqshadaynta garaafyada ayaa goob joog ka ahaa iyada oo ay ugu mahad-naqayso hor-dhiggeeda, Habka Swiss ama sidoo kale loo yaqaan qaabka caalamiga ah. Qaab aad u caan ah oo ku jira 50s. Habkani wuxuu caan ku yahay ujeeddadiisa iyo caqli-galnimada naqshadihiisa. Sidaa darteed, waxay ku soo dhawaadeen dhinacyo badan oo shaqeynaya waxayna ka fogaadeen fannaanka.
Taasi waa sababta muhiimad badan loo siiyay isbarbardhigga qoraalka iyo khadadka la amray, marka lagu daro, isticmaalka qaabab joomatari fudud iyo wareegsan, wejiyo xarrago leh, Shaashado badh-dhafan, sawir-qaadista meelaha bannaan iyo qaab-dhismeedka agabka dhismaha.
Naqshadayaasha ama fanaaniinta
Xigasho: thomas danthony
Waa naqshadeeye garaafeed iyo sawir-qaade ku dhashay Faransiiska balse saldhigiisu yahay London. Tan iyo markii uu ku guuleystay abaalmarinta Handsome Future, wuxuu u yimid inuu caddeeyo inuu yahay mid ka mid ah sawir-qaadayaasha ugu rajo-gelinta iyo kartida badan. Macaamiisheeda ayaa ah kuwa ugu awooda badan: M&C Saatchi, Microsoft, Nokia iyo Little White Lies. Waa qayb ka mid ah qaabka naqshadaynta arxan-darrada waxayna ilaalisaa xididdada qaabka Swiss sababtoo ah qaababka joomatari.
Shaqadiisu waxay inta badan ka kooban tahay sheeko lagu xoojiyay isticmaalka xariifnimada leh ee iftiiminta taas oo u oggolaanaysa sawiradu inay sheegaan sheeko iyo sidoo kale ka dhigista daawadayaasha inay fikiraan.
Ernst Keller waxa uu ku dhashay 1891 in Aarau, Switzerland. Waxa uu bartay fanka iyo suugaanta intii uu ku jiray xirfadda naqshadeeye waxa uu u sameeyay boodhadhka Kunstgewerbemuseum ee Zurich, oo loogu talagalay samafal kala duwan iyo calaamado heraldic ah oo badan.
Shaqadiisa naqshadeeye ahaan sidoo kale aad ayaa loogu qiimeeyaa qoraalka iyo naqshadeynta garaafyada ee dhismaha. Laakiin, haddii Ernst Keller uu aasaas u yahay shay, waxaa sabab u ah shaqadiisa macallinnimo iyo saameynta cajiibka ah ee uu ku yeeshay ardaydiisa badan.
Sannadkii 1918 kii, Keller waxa uu baridda naqshadaynta iyo qoraalka ka bilaabay dugsiga caanka ah ee Kunstgewerbeschule (School of Applied Arts) ee Zurich, halkaas oo uu ku sii waday ilaa uu ka fadhiistay 1956-kii, ka dib tobanaan sano oo uu baray naqshadeeyayaasha da'da yar ee soo saaray qaabka Swiss sannadihii 50-yadii. Ernst Keller waxaa loo arkaa inuu yahay aabaha qaabka Swiss, oo markii dambe loo yaqaan 'International Typographic Style'.
Tan waxa u sabab ah tirada badan ee ardayda Keller oo markii dambe qaabeeyey oo faafiyey qaabkan naqshadaynta. Wax ku biirinta Ernst Keller ee horumarinta mabaadi'da waxbaridda hal-abuurka leh ee tababarka naqshadaynta ayaa door aasaasi ah ka ciyaara. Dhab ahaantii, wuxuu ahaa abuuraha mid ka mid ah barnaamijyada tababbarka ugu horreeya ee nidaamsan ee naqshadeynta garaafyada adduunka.
Sannado badan oo uu wax bari jiray intii u dhaxaysay 1918 iyo 1956 waxay keentay naqshadeeyayaal aad u kala duwan. Waxaa ka mid ah jilayaasha naqshadeynta garaafka cusub sida Richard Paul Lohse, Josef Müller-Brockmann iyo Carlo Vivarelli ama xirfado kala duwan oo sawir farshaxan ah sida Heiri Steiner, Lora Lamm ama K. Domenic Geissbühler, iyo naqshadeeyayaasha cusub sida Hermann Eidenbenz ama Gérard Miedinger
Waxa uu ahaa mid ka mid ah fanaaniinta ugu dhammaystiran uguna waxqabadka badan waqtigeena. Waxaa loo aqoonsaday in uu yahay garaad caalami ah, waxa uu ka soo shaqeeyay naqshadeeye, rinjiile, farshaxan-yaqaan, naqshadeeye, macalin iyo siyaasi iyo waxyaabo kale. Noloshiisa oo dhan dhammaan qaybaha waa la midoobey, ma jirin kala saaritaan cad oo u dhexeeya farshaxanka iyo hawlaha kale, wax walbaa waxay qayb ka ahaayeen fikrad isku mid ah oo caalami ah.
Waxa uu ku dhashay 1908 dii Winterthur, oo ah magaalo shaqo oo u dhow Zurich, halkaas oo uu u aadi lahaa inuu wax ka barto dahab-sameeyaha Dugsiga Farsamada. ka hor inta uusan bilaabin waxbarashadiisa 1927 ee Bauhaus, halkaas oo tirooyinka caliber Vasili Kandinsky, Paul Klee, Josef Albers, László Moholy-Nagy iyo Walter Gropius ay wax ku barayeen. Bill wuxuu joogi doonaa laba sano Dessau, inta lagu guda jiro taas oo uu ku milmay waxbarista dugsiga, oo uu qeexay khadadka guud ee shaqadiisa.
Haddii aad meeshan soo gaadhay, waxa aan rajaynayaa in aad wax ka baratay qoraalkan kooban ee aanu ku tusinnay. Maxaase ka badan oo ku saabsan dhismaha ama ku saabsan da'da dhijitaalka ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Waa maxay naqshadaynta arxan-darrada?
Sida loo sameeyo xarfaha gothic
Sida loo tirtiro asalka sawirka Word si deg deg ah oo fudud